Muxuu ka yiri Dani Carvajal kulanka adag ay caawa ku wajahayaan kooxda Roma tartanka Champions League? – Gool FM
(Real Madrid) 27 Nof 2018. Difaaca garabka midig ee kooxda Real Madrid Dani Carvajal ayaa xaqiijiyay in Los Blancos ay eeganeyso in ay hogaanka u qabato garoup-ka ay kaga jirto tartanka Champions League.
Hadalka Dani Carvajal ayaa wuxuu imaanayaa kahor kulanka ay caawa ku wada ciyaari doonaan kooxda reer Talyaani ee Roma tartanka xiisaha badan ee tartanka Champions League.
Kooxda ka dhisan caasimada Madrid ee Los Blancos ayaa ku hogaamineysa Group G ay kaga jirto tartanka Champions League 9 dhibcood, waxayna isku dhibco yihiin kooxda ay caawa is wajihi doonaan ee Roma, laakiin Real ayaa hogaanka ku heysa kadib markii ay guul 3-0 ah ku soo gaartay kulankii lugta hore.
Hadaba Dani Carvajal ayaa wareysi uu ku bixiyay wargeyska “Marca” ee dalka Spain kahor kulanka caawa wuxuu kaga hadlay dhowr arimood ee ku saabsan ciyaartan.
“Waxaan qeyb ka noqday kulankii Eibar, kadib dhaawacii soo gaaray Álvaro Odriozola, waxaana bixiyay qaab ciyaareed fiican, kooxda xaaladeeda ma aysan fiicneyn, balse waxaan garoomada ugu soo laabtay inaan dareemo jawi wanaagsan”.
“Waxaan wajihi doonaa kulan adag kooxda Roma, waxaana dooneynaa in wareega xiga kaga gudubno inagoo hogaamineyna Group-kayaga, waxaana muhiim ah inaan sidaas sameyno”.
“Waa inaan ku ciyaarnaa madax qabooban, si fiican ayaana u garaneynaa sida aan ula dhaqmi lahayn kulamadan oo kale”.